न्युजिल्याण्ड नेपाल सोसाइटीले २५औ बार्षिकोत्सव मनायो - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
न्युजिल्याण्ड नेपाल सोसाइटीले २५औ बार्षिकोत्सव मनायो
-- सञ्जय शान्ति सुवेदी / प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन १६, २०७७
न्युजिल्याण्ड नेपाल सोसाइटीले २५ जुलाई २०२० मा अकल्याण्डमा आफ्नो स्थापनाको २५ औ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । श्री जोग प्रसाद लिम्बूको अध्यक्षता र सर एडमन्ड हिलारीको संरक्षणमा इस्वी १९९५ मा स्थापित सबैभन्दा पुरानो नेपाली क्रियाशील संस्था हो न्युजिल्याण्ड नेपाल सोसाइटी ।
कार्यक्रमका मुख्य अतिथि अकल्याण्डका मेयर फिल गोफले रजत महोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्नु भएको थियो । उहाँले न्युजिल्याण्डमा नेपाली संस्कृति र भाषालाई जीवन्त राख्न गरेको प्रयासको सराहना गर्नुभयो । तेञ्जिङ र एडमण्डले सगरमाथा आरोहण गरेकाले मात्रै भन्दा पनि त्यस पश्चात एडमण्डले नेपाल र नेपालीसँग कायम राखेको निकटताले नेपाल र नेपालीबीच पृथक एवं आत्मीय सम्बन्ध रहेको बताउनु भयो ।
सोसाइटीको रजत जयन्ती समारोहमा अन्य अतिथिहरु न्युजिल्याण्डका सासंदहरु मेलिसा ली, प्रियांका राधाकृष्णन, डा. परमजीत परमार तथा नेपालका लागि कन्सुलर पिटर गिब्सले आफ्नो शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थियो । उहाँहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निरन्तर प्रगाढ बनाउन तथा न्युजिल्यान्डको संस्कृतिक विविधतामा नेपालको पनि उल्लेख्य स्थान रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सर एडमन्ड हिलारी पश्चात सोसाइटीको संरक्षकको भूमिकामा रहुनुभएकी लेडी जून हिलारीले न्युजिल्याण्डमा नेपाली समुदायलाई अभिभावत्व प्रदान गरेकोमा विशेष समारोह गरी सम्मान गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि फिल गोफ, संरक्षक जुन हिलारी तथा संस्थाका अध्यक्ष डा. सन्तोष भण्डारीले भूतपूर्व कार्यकारी पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई उहाँहरुको योगदानका लागि प्रमाणपत्रले सम्मान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष डा. सन्तोषले सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई स्वातग गर्नु भएको थियो भने मुना ढकालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । नव निर्वाचित कार्यकारी समितिको यो पहिलो कार्यक्रममा १५० भन्दा धेरै नेपालीहरुको सहभागिता रहेको संस्थाका सचिव डा. सञ्जय मरासिनीले बताउनुभयो ।